पौडेल पोल्याण्डमा एमबीए अध्ययनरत छन् ।
संसार कोरोनाको महामारीसँग जुध्दैगर्दा म पनि मध्यपूर्वी यूरोपेली देश पोल्याण्डबाट यो लेख लेख्दैछु ।
म एउटा सोधकर्ता र भर्खरै पोल्याण्डबाट मास्टर डिग्री सकेको विद्यार्थी हुँ । म यो कोरोनाको महामारी शुरू हुनुअगावै केही युरोपेली मुलुकको भ्रमण र शोध तथा अध्ययनका लागि विभिन्न देश म पुगेको थिएँ ।
यो करीब २०औं दिनको यो लकडाउन हो र करीब–करीब हामी सबै घरभित्र नै छौं अनि त्यो अति आवश्यक छ । मैले केही दिनदेखि राष्ट्रिय मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा ठूल्ठूला अनियमितताका समाचार आएरहेका छन् । त्यहाँ रहँदा मैले ती देशका सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक विश्लेषणका केही सेमिनारमा भाग लिने मौका पाएको थिएँ । तिनै अनुभवले आज हाम्रो देश नेपालको वर्तमान अवस्थालाई चित्रण गर्न मद्दत गर्छ भन्ने लाग्छ ।
छिमेकी देशहरू कोरोनासँग निकै सघन लडाईंमा छन्। जर्मनी र फ्रान्सको स्वास्थ व्यवस्था निकै राम्रो मानिन्छ र पनि उनीहरू यो लडाईंमा कताकता बिराएको अनुभव विभिन्न मिडियामा सुनाइरहेका छन् । अझ तलतिर इटाली र स्पेन निकै पछुतो मानिरहेका छन्, किनकि उनीहरूले यो महामारीलाई निकै हलुका र आफ्नो स्वास्थ व्यवस्थाको दम्भ देखाए जसरी लिए । यो निकै भयानक र क्रुर रहेछ भन्ने कुरा शक्तिशाली देशहरूलाई त बल्ल भान हुँदैछ ।
पूर्वी यूरोपेली देशहरू निकै चनाखो देखिन्छन् किनकि उनीहरूलाई थाहा छ उनीहरूको स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र स्तर पश्चिमा विकसित देशहरूभन्दा निकै फितलो छ । र अर्को कारण यो पनि होकि पूर्वी युरोप भर्खरै मात्र विकसित देशहरूसँग प्रतिस्पर्धाको पहुँचमा पुगेका छन् । मैले पश्चिमा देशका जनतामा भन्दा अलि धेरै उग्र देशप्रेम र माटोप्रतिको माया यी पूर्वी युरोपेली देशहरूमा देखेको छु ।
आज यही सेरोफेरोबाट मेरो देश र मेरो माटोमा भैरहेका केही घटनाक्रमलाई नियाल्दा केही लेख्नु जरुरी ठान्दछु ।
मेरो देश आज बिरामी छ । मेरो देशका प्रधानमन्त्री पनि बिरामी हुनुहुन्छ । सर्वप्रथम प्रधानमन्त्रीज्यूलाई शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना । मानसिक रूपमा लाखौं जनता बिरामी छन् । कोरोना महामारी बल्ल प्रवेश गर्दैछ ।
हामीले करीब २ महिना अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समयमा केही गरेनौं भन्दा शायद बेठीक नहोला । हामीलाई २ महिनामा के गर्न सकिन्छ भनेर कसैले सोध्यो भने हामी मुर्ख हो किनकि हाम्रै छिमेकीले एक हप्तामा कोरोनका लागि छुट्टै हस्पिटल बनायो । हामी जति धेरै स्रोत र साधनमा पछाडि छौं, उति नै इच्छाशक्तिमा पनि । हामीले निम्न ५ काम करीब २ महिनाअघि नै गर्नुपर्ने थियो, तर समयमा गरेनौं ।
१. हामीले उचित समयमा नाका बन्द गरेनौं।
२. हामीले अझै पनि स्वास्थ्यकर्मीको उचित कदर, प्रोत्साहन र सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरेनौं ।
३. हाम्रो विकास बजेट धेरैभन्दा धेरै अझै पनि खर्च हुन बाँकी छ र त्यो खर्च नहुने सम्भावना बढेको छ । हामीले बजेट आभाव देखाउँदै न पीपीई किन्यौं न अस्थायी हस्पिटल निर्माण गर्‍यौं ।
४. मेलमिलाप र समन्वय कहीँ देखिँदैन । सरकारले उच्चस्तरीय समिति विज्ञविहीन बनायो । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको तालमेल कहीँ देखिँदैन ।
५. हामीले १ जनामा कोरोना देखिएपछि र्‍यापिड टेस्ट र मित्रराष्ट्र साउथ कोरियाको फर्मुला (फाइन्ड, टेस्ट, आइसोलेट, ट्रिट)लाई पूरै बाइपास लगायौं ।
एक कम्युनिस्ट नेता एवं माननीय मन्त्रीज्यूको अन्तर्वार्ता हेर्दै गर्दा उहाँले भन्नु भो– 'बाहिरबाट सजिलो देखिन्छ, तर वास्तवमा काम गर्न गाह्रो हुन्छ, त्यसमा सत्यता थियो ।
आज यो समय काम गर्ने समय हो, मन्त्रीज्यू ! सधैं समय आउँदैन र सधैँ मानिसको जीवन बचाउन सकिन्न । यो बुझ्न जरुरी थियो कि नेपालजस्तो देशले गर्ने भनेकै उच्च पूर्वसावधानी र पूर्वतयारी हो । हामी विपदपछिका लागि कुनै हालतमा तयार छैनौं। त्यसो भनिरहँदा किन तयार छैनौं भन्ने प्रश्न आउन सक्छ, यो सही प्रश्न हो ।
हामी निकै कम प्रतिव्यक्ति आय भएको अल्पविकसित देशको सूचीमा छौं र यो एउटा तीतोसत्य हो । हामी हिजो राजतन्त्रमा त्यही कुरा गर्थ्यौं, हाम्रो शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र उच्चस्तरको भएन भनेरै हो क्रान्ति र आन्दोलनको बिगुल बजेको । हजारौंले त्यही भएर बलिदान दिएको । त्यो रगत तिम्रो चिल्ला र महंगा सवारीका लागि थिएन महोदय ! त्यो बलिदान, अर्बौंको हेलिकप्टर त्यो पनि एक उच्च व्यक्तिको प्रयोगको लागि थिएन ।
अनि सबैभन्दा हास्यास्पद् कुरा त के छ भने जुन पार्टीले त्यो बलिदान र क्रान्तिको ज्वाला बाल्यो त्यही पार्टी आज दुईतिहाइको बहुमतसहित सरकामा छ ।
प्रधानमन्त्रीज्यू, हजुरको स्वास्थलाभको कामना गर्दछु । समस्या कहाँ छ भनेर खोज्नु जरुरी छैन किनकि जो कोही समस्या बोल्दिन तयार छ । समाधान कहाँ छ ? यो निकै सजिलो छ। कहीँ नजानुस, कहीँ नसोध्नुस् । बस भोलि बिहान २ काम गर्नुस् । पहिलो त आजको समस्या कोरोनाको कहर हो । तपाईं राम्रोसँग काम गर्ने अवस्थामा हुनुहुन्न र हजुरका आसेपासेको गुणस्तर जाँच गर्नुस् ।
तपाईंलाइ २४ घण्टा सुझाव दिने तपाईंका सल्लाहकारको परीक्षण गर्नुहोस् । तपाईंको सचिवालयमा पूर्ण प्रतिस्पर्धामा विज्ञ समूहबाट, विश्वविद्यालयका उत्कृष्ट प्राध्यापक तथा विद्यार्थीको समूहबाट निर्माण गर्नुस् ।
तपाईंको राष्ट्रिय बजेट फ्रिज हुन लागेको छ, त्यसलाई प्रयोग गरेर भएपनि कोरोनाका लागि दिनरात नभनी खट्ने स्वास्थकर्मीलाई उच्च सम्मानमा कुनै कमी नराख्नुस् ।
फुर्सद निकालेर डब्लूएचओ र केही उत्कृष्ट मुलुकले अपनाएका केही तरिका हेर्नुहोस्, पढ्नुहोस् ।
हो तपाईंको सरकार यो निकै चुनौतीपूर्ण र अवसरको समयमा छ । तपाईंको सरकारले थुप्रै काण्ड र अनियमितामा शतक प्रहार गरिसकेको अवस्था सबैलाई जगजाहेर छ, फेरि यो अन्तिम मौकाले तपाईंको पार्टीलाई र सरकारलाई गुमाएको साख फर्काउने अवसर छ ।
यस्तो दिन नआओस्, दुईतिहाइ बहुमतको दुरूपयोग गर्दा हजुरका लाखौं कार्यकर्ता र नेताले नेकपा पार्टीको अन्तिम सत्तारोहण हजुरकै कारणले, हजुरकै अदुरदर्शिताले भएको हो भनेर नभनुन् ।
समयले यो दुईतिहाइको दम्भ र अकर्मन्यतालाई काम गर्न पूरापूर अवसर दिएको छ । कयौं अनियमितता र असफलतालाई चिर्न एउटा यही कोरोना कहर काफी छ । वश् तपाईंका दुईचारवटा निर्णय सही र राष्ट्रहितमा हुनु जरुरी छ ।
म फेरि याद दिलाउन चाहन्छु, यही टीम र यही सचिवालयबाट सफलता सम्भव छैन । प्रधानमन्त्रीज्यू, यो समय प्रतिस्पर्धा र क्षमताको युग हो । असक्षम र निकम्माहरूको टीम लिएर तपाईंको 'समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली'को सपना पूरा हुन सम्भव छैन ।
मैले नेकपाका कतिपय नेताले अझै पनि अर्को चुनावमा दुईतिहाइ बहुमतको निकै आशालाग्दो सपना बोकेको देखेको छु । त्यो सम्भव छ त केवल यो कोरोना कहर जित्न सकेको खण्डमा ।
शायद नेकपाको बहुमत परीक्षणका लागि यो अन्तिम मौका हुन सक्छ । चीनबाट लिएको मेडिकल सामग्री घोटालादेखि थुप्रै घोटाला यादगार छन्, तर मानव जातिकै लडाईं चलेका बेलामा यदि यो सरकारले नेपाली जनताको रक्षा गर्न सक्यो भने अन्य कैयन असक्षमताहरू माफी हुन सक्छन् । आगे हजुरकै मर्जी !
वार्सा पोल्याण्ड ।
मैले देखेको युरोप
प्रिय रविजी, तपाईं प्रधानमन्त्री भएको हेर्ने रहर छ !